လုပ်သားကျန်းမာရေးအတွက် “ပရကန်စံခုမ်း” ဟာဘယ်လောက်အရေးပါလဲ – Myanmar Live
ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ရေလုပ်သားများလည်း အခြားလုပ်သားများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားများနည်းတူ လုပ်ငန်းခွင်အပြင်၌ နာမကျန်းဖြစ်လျှင်လည်း ပရကန်စံခုမ်း သို့ လူမှု့ဖူလုံရေးအာမခံ ဖြင့်ဆေးရုံသွား ကုသနိုင်မည်ဟုဆို။
ယခင်က ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများဖြစ်တဲ့ ရေလုပ်သားများသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှသာလျှင် ပရကန်စံခုမ်း သို့ လူမှု့ဖူလုံရေးအာမခံကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှရေလုပ်သားများသည်လည်း အခြားလုပ်သားများနည်းတူ လုပ်ငန်း ခွင်အပြင်၌ နာမကျန်းဖြစ်လျှင် ပရကန်စံခုမ်း သို့ လူမှု့ဖူလုံရေးအာမခံ အသုံးပြု၍ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ စပြီး မိမိတို့ ပရကန်စံခုမ်း သို့ လူမှု့ဖူလုံရေးအာမခံ သွင်းထားသည့်ဆေးရုံ၌ အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်အညီ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၁. ရေလုပ်သားများ လုပ်ငန်းခွင်အပြင်၌လည်း နာမကျန်းဖြစ်လျှင် ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ရန်အတွက် လှေပိုင်ရှင်မှ ၄င်းတို့၏အလုပ်သမားများကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့်အချက်များနှင့် အညီ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံလုပ်ပေးရမှာဖြစ်သည်။
၂. ရေလုပ်သားများနာမကျန်းဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ဆေးစစ်လက်မှတ်ဖြင့် အနားယူနေရသည့်အချိန်များတွင် အလုပ်ရှင်မှ အစိုးရသတ်မှတ်ပေးထားသည့်လုပ်အားခ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်သမားအား အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်အားခရှင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၃. လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) ကိုယ်ခန္ဓာစွမ်းရည်များဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ်အလုပ်ကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်အခြေအနေကိုဆုံးရှုံးခြင်းတို့ဖြစ်စေသည့်တိုင်အောင် ထိခိုက်နစ်နာ ပြီး အလုပ်ပြန်လည်မလုပ်နိုင်ပါက အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေအရ အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခ၏ အမြင့်ဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လပေါင်း ၁၈၀ ကို နေ့စားခ ၃၀ ရက်စာ (ပုံမှန်နေ့စားခ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြင့်မြောက်ခါ အလုပ်သမားအား နစ်နာကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၄. ရေလုပ်သားတစ်ဦး လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတွင်သေဆုံးခဲ့လျှင် အလုပ်ရှင်မှနာရေးစရိတ်အတွက် ဘတ်ငွေ ၄ သောင်း ထောက်ပံ့ရမည်ဖြစ်ပြီး နေ့လုပ်အားခ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ၁၂ လဖြင့်မြှောက်ခါသေဆုံးသူ၏ အမွေဆက်ခံသူကို ပေးအပ်ရမည်။ အကယ်၍ အမွေဆက်ခံမည့်သူမရှိပါက ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှဆက်ခံသင့်သောသူကိုပေးအပ်ရ မည် ။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : komchadluek
Taggedlabourlabour newsMOUMyanmarlivenews #Myanmarlive #Myanmar #Thailand #journal #freecopy #mahachai #samutsakorn #betterlife #news #Thailand101 #Maesot #Birdy #Burnovagel
Previous Article ရန်ကုန်တွင် ကွန်ထရိုးစင်တာဖြင့် စမတ်မီးပွိုင့် ၁၅၄ ခုစတင်အသုံးပြု
Next Article ဘန်ကောက်အတွင်းလေထုညစ်ညမ်း PM2.5 ပြဿနာ ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်နိုင်သည် အထိ ဆိုးရွား !!!